12 Nofembar, 2003, 22:02 GMT; 01:02 SGA
Fadumo oo soo naaxday 18 maalmood kadib
Weriyaha BBC-da ee Talyaaniga
Soomaali uu gacanta hayo askari Talyaani ah oo laga soo badbaadiyay doon
Markii ay soo naaxday Faduma oo suuxsaneyd ilaa iyo 18 maalmood, dhakhatiirtu waxaa ay dareemeen inay xoogaa guul ah ka gaareen dadaalkooda ahaa inay badbaadiyaan gabadhaasi oo ilaa markaasi aheyd qofka kaliya ee la garan waayey magaceeda, maadaama ay in muddo ah miyir la’yed, ayaa la isaga bixiyey magaca Zahra, madaama la waayey qof garta magaceeda.
Waan fiicanahay, waxaa la i dhahaa Faadumo
Fadumo oo 18 maalmood miyir la'ayd
Faduma waxaa ay ka mid tahay 15 qof oo ka badbaaday doontii ay ku dhinteen in ka badan toddobaatanka qof oo u badnaa Soomaali oo ka soo haajiray xeeb ku taal Libya, rabayna inay soo gaaraan xeebaha Talyaaniga. Markii loo soo gurmanayey doonta, Faduma laguma darin intii iyagoo nool la badbaadiyey, hase yeeshe, waxaa loo maleynaayey inay meyd tahay maxaa yeelay waxaa ay ku dhex jirtay meydki isdul raseysnaa ee laga dhex helay doonta.
Inay nooshahay waxaa la oogaday oo kaliya markii dekedda la keenay doonta, oo la arkay iyadoo far dhaqajineysa, halkaas ayaana loogu gurmaday, waxaa markiiba lagu qaaday helikobtarka gurmadka waxaa la geeyey isbitaalka Palermo, halkaasi oo iyada iyo 8 kale oo 7 soomaali yihiin ay uga bilaabatay in lagu daaweeyo qeybta bukaanka aadka u liita.
Iyadoo shan ka mid ah dadkaasi ay hadda fiican yihiin, ayaa dhakhatiirtu waxaa ay ku taliyeen inay bixi karaan. Waana bixintaankooda meesha ay su’aashu ka taagan tahay, maxaa yeelay haddi aanay qaraabo ku leheyn dalka Talyaaniga, waa ay adag tahay in qaxootigaasi ay helaan meel martigalisa.
Waana dhibaatada wada heysata dhammaan dadka magangalyo doonka ah ee ku sugan dhulka Talyaaniga. Dadka qaxootinimada dalbada dalka Talyaaniga waxaa la siyaa sharci ku meel gaar ah oo saddex bilood oo ay ku sugaan inta ay ka marayaan waraysiga la xiriira codsigooda.
2-dii October, doon ka soo baxday Libya, 19-kii October, ayaa la helay 100 qof oo saarnayd, waxaa badbaaday 15 qof oo 13 Soomaali ahay iyo 2 Itoobiyaan ah, 13 ayaa maydkooda laga helay doonta, inta kale oo 70 ka badan waxaa la aaminsanyahay in ay dhinteen.
20-kii October, waxaa xeebaha Talyaaniga gaaray shan doon oo ay saaran yihiin ilaa 400 oo qof.
28-kii October, waxaa jasiiradda Sicilia soo gaaray doon ay saaran yihiin 171 qof.
10-kii November, waxaa xeebaha Talyaaniga laga helay doon ay saaran yihiin shan oo nool iyo qof mayd ah.
Sugitaankaasi, waxaa uu qaataa waqti dheer, oo gaaraya ilaa iyo labo sano. Haddaba muddadaasi ay sugayaan jawaabta, wax kaalmo ah dadka qaxotinimo-doonka ah kama helaan dawladda talyaaniga. Iyaga ayaana isdabbira.
Isteeshanka tareenka Rooma ee la yiraahdo Stazione Tiburtina, waxaa dhabarkiisa ku yaal saddex dhisme oo duq ah oo soo dumi raba oo laga guuray.
Labo ka mid ah dhismayaasha oo koronto iyo biyo la’aan ah waxaa ku dhex nool shan boqol oo qof oo ay ku jiraan qoysas ilmo wata oo ka kala yimid Eritrea Itoobiya iyo Sudan.
Ma ahan dad sharcidarro ku jooga dalka Talyaaniga, hase yeeshe, waa dhallinyaro sugeysa in looga yeero xafiiska u qeybsan qaxootiga. Qaarkood waxa dhismayaashaas oo ay ugu magac dareen Hotel Africa ay dhex deggan yihiin ka badan labo sanadood. Meesha dhexdeeda waxaa ay ka furteen makhaayad yar oo laga cunteeyo oo qofkii lacag heystaa uu ku qadeyn karo ilaa iyo saddex Euro.
Mar mar waxaa u soo gurmada oo kaalmo caafimaad u fidiya ururka dhakhaatiirta aan xuduudaha leheen Msf. Cid kale oo ey gargaar ka helaan ma jirto. Sharciga ku meel gaarka oo ey heystaan oo saddexdi biloodba la cusboneysiiyo, kuma shaqeysankaraan, sidaasi darteed shaqooyinka ey heli karaan waa kuwa suuqa madow ah.
Qaxootida soomaalida, kuwooda aan dad ku leheyn dalka Talyaaniga, waxaa badaana ay soo aadaan magaalada Roma.
Maalmahaan si aad ah ayey ugu soo bateen maxaa yeelay Soomalidii xeryaha laga soo saaray oo la soo siiyey min saddex bilood oo sharci ah, waxaa intooda badan ay soo aadeen magaala madaxda Talyaaniga.
Waxaana iyagoo aad u dacdaran ay jiif u raadsadaan dhismayaasha Safaaradda iyo Qunsuliyadda Soomaalida, oo nal iyo biyo la’aan ah.